Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fifandraisana efatra ho an'ny fanombohana teknika | Martech Zone
Alakamisy Janoary 6, 2011 Alarobia, Oktobra 29, 2014 Adam Small
Mampiditra vitsivitsy anatiny sy ivelany fomba fanao tsara indrindra amin'ny fifandraisana dia hanome fototra mafy orina amin'ny fitomboana amin'ny ho avy.
Fantaro ny sandan'ny fifandraisana amin'ny daholobe - Ny kabary am-bava sy ny sioka dia miteraka fahalianana ary ampahany lehibe amin'ny fitoriana ny filazan'ny mpividy teknolojia ankehitriny. Saingy ny programa PR nentim-paharazana dia manana fidirana amin'ireo mpandalina sy tonian-dahatsoratra izay manana mpamaky mpamaky vonona sy tsy mivadika. Rehefa manao bitsika na manoratra lahatsoratra ao amin'ny orinasanao ny mpamoaka lahatsoratra iray, dia mety misy an'arivony ka hatramin'ny an'aliny maro no hijery azy. Ireo mpandinika indostria sy tonian-dahatsoratra dia manana ny lazany ihany koa amin'ny maha manam-pahaizana mahomby azy. Ny fananana fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo ny vahaolanao dia mitondra lanjany bebe kokoa noho ny fanamafisana tena. Mandraisa andraikitra amin'ny mpanao gazety izay manana traikefa amin'ny sehatry ny vokatrao. Araraoty ny traikefan'izy ireo ary ampahafantaro ireo manam-pahaizana izay manafatra vokatra mitovy aminao. Ampianaro ireo influencers ireo amin'ny fanavaozana ny tsenan'ny tsena, ny fanavaozana ny teknolojia ary ny fandefasana hafatra mifandraika amin'ny fironana indostrialy. Miezaha manangana fifandraisana maharitra amin'ny mpanao gazety ary mahazo fahalalana momba izay ilainy mba hamokarana atiny famoahana.
Andramo ny hafatry ny orinasa mifanohitra amin'ny fomba fijery ivelany sy ny fikarohana - Aza misotroa ny koolaid ary ekeo an-jambany ny fomba fijerin'ny fitantanana an'izao tontolo izao. Ny fanekena ny kabary ao anaty izay mampanantena ny vokatrao ho “voalohany, tokana, tsara indrindra ary mpanjifa milahatra mividy” dia mety tsy hifanaraka amin'ny zava-misy ary tokony hosedraina. Na dia fatra ara-pahasalamana ara-pahasalamana aza no tiana holazaina amin'ny marketing, aza hadino ny zavatra hafa mitranga eo amin'ny tsena. Aza manao ny marina. Raha tsy ianao no voalohany sy tsara indrindra - aza atsofoka ao anaty vala volamena io. (Teny fampitandremana ihany koa: Tandremo sao mampiasa teny fohy sy teny fohy.) Fero ny superlatives - anatiny sy ivelany. Bulletproof ny fandefasan-kafatrao amin'ny mpandinika indostria sy ny manam-pahaizana mahazatra ny fifaninananao sy ny tsena lalaovinao. Ny vokatra na serivisy tsirairay dia manana mpifaninana karazana– ny orinasa iray dia tsy tokony ho mpitarika amin'ny sokajy iray. Ny fitantanana fanamby hamokatra zava-misy, fanadihadiana ary vinavina hanohanana ny fivelaran'ny sori-dalan'ny vokatra. Ny tanjona iraisan'ny rehetra dia ny fahombiazan'ny orinasa.
Amporisiho ny fifandraisana eo amin'ny vondrona teknika sy orinasa ao amin'ny fikambanana misy anao - Mivelatra ny loharanom-bola amin'ny fanombohana saingy sorohy ny fanakanana hanasaraka ny ekipan'ny fampivelarana ny vokatrao amin'ny olona (matetika ny varotra sy ny marketing) izay miresaka amin'ireo mpanjifanao amin'ny ho avy. Indraindray ireo mpandraharaha teknika dia lasa mandroso amin'ny haitao "cool" nefa tsy manamafy fa ny gizmo farany dia zavatra iray izay te-handoa vola. Ireo teknolojia mamolavola vokatra ao anaty banga nefa tsy mifantoka amin'ny takian'ny tsena sy ny fahafaha-manao dia mety hamokatra vokatra izay tsy handefa ny orinasa araka ny nandrasana. Amporisiho ny fanehoan-kevitra avy amin'ny varotra sy ny marketing amin'ny ekipa fampandrosoana ary manara-maso ny fironana amin'ny indostria hampifanaraka ny sori-dalan'ny vokatra sy ny takiana amin'ny ho avy.
Fampitaovana ny mpiasa amin'ny fitaovana ilaina ilaina mba hifandraisana mahomby amin'ny vanim-potoana elektronika - Ny fifandraisana mahomby dia mitaky mihoatra ny finday sy kaonty mailaka. Ny orinasa dia tokony hametraka politika sy fenitra amin'ny fivoriana elektronika, fandefasan-kafatra eo no eo ary ny kaonferansa. Ny fampitaovana ny mpiasa amin'ny rindrambaiko sy ny fitaovana ilaina amin'ny fifandraisana tsy misy tohiny dia mitazona ny mpiasa hifandanja sy hamokatra. Ny fampiasana fonosana rindrambaiko fivoriana elektronika (feno fampahalalana momba ny fidirana) dia tokony ho azon'ny rehetra mandahatra fivoriana. Ny tsipika fihaonambe sy ny teny miafina mifandraika amin'izany dia tokony ho fantatra ary misy tsipika eo an-toerana mankamin'ireo firenena izay tafiditra tsy tapaka. Ny farany nefa tsy tokony ho izy dia mila toerana fitahirizana nomerika ahafahan'ny mpiasa mandefa fifandraisana anatiny toy ny lahatahiry orinasa izay misy ny fomba fifandraisan'ny antoko fahatelo sy ny laharan'ny sela. Mametraha fenitra sy torolàlana momba ny fifandraisana anatiny sy ivelany. Mangataha antso an-tariby haverina ary ny mailaka hamaly azy ao anatin'ny politika tompon'andraikitra.
Ny fanampiana ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny fanombohana ny teknolojia dia hanampy amin'ny fiantohana ny fahombiazana rehefa mihalehibe ny ekipanao ary miatrika ireo fanamby amin'ny famindrana hevi-baovao sy vokatra vaovao eo amin'ny tsena.
The Genius Marketing an'i Jim Irsay
Jan 7, 2011 ao amin'ny 3: 02 AM
Lahatsoratra tsara, Joy! Misaotra betsaka tamin'ny nanatevin-daharana anay. Ny sasany amin'ireo haino aman-jery vaovao dia manao ambanin-javatra tanteraka ny herin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro saingy efa hitanay tamin'ny fiarahanay sy ny mpanjifanay izany!